Sehatra fanodinana fako eto Madagasikara Hahazo asa ireo vehivavy marefo ara-pivelomanana
3 volana nikatsoan’ny sehatra fizahantany 1,5 tapitrisa ireo efa very asa
Miisa 1 500 000 ny mpiasa misehatra amin’ny fizahantany no efa very asa ankoatra ny fatiantoka nandritra izay 65 andro tsy nihodinan’ny sehatra
Fahamehana ara-pahasalamana 200 miliara ariary ho an'ny drafitra sosialy
Araka ny fanombohana ny fandinihana ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana 2020 (LFR 2020) dia navoaka tamin’ny tatitry ny filan-kevitry ny Minisitra farany teo ny mamaritra izany.
Kompania Tsaradia Hisy ny sidina natokana ho an’ireo entam-barotra
Noho ny fangatahana sy ho fitsinjovana ireo mpandraharaha ara-toekarena dia hisy ny sidina manokana ho fitaterana ireo entam-barotra na dia mbola tsy mivaha aza ny olana ateraky ny aretina coronavirus.
Notanterahina tetsy amin’ny CFPF (Centre de Formation Professionnelle pour les Femmes) ny fanaovan-tsoniam-pifanarahana mahakasika ny tetikasa hanamboarana Biogaz amin’ny alalan’ny fako.
Ny CFPF sy ny Fondation Telma no nanatanteraka izany ho fitsinjovana manokana ireo vehivavy tena sahirana ara-pivelomana. Tanjona ny mba tsy hiankinan’izy ireo amin’ny hafa amin’ny lafiny ara-bola satria misy ihany koa ny fanofanana maro izay hiteraka asa avy hatrany hampaovin’ny CFPF azy ireo ankoatran’ny tetikasa. Anisan’izany ny resaka zaitra, ny fikarakarana zaridaina ary ny informatika sy ny sisa. Tsiahivina fa ity tetikasa fanodinana fako dia hanamboarana angovo ary hahazoana misitraka jiro amin’ny alalan’ny fampiasa groupe amin’ny biogaz. Tanjona ny hampihenana hatrany ny vola lany amin’ny fampiasana ny jiro sy ny fiampitana mankany amin’ny angovo azo avaozina izay tsy azo ihodivirana intsony ankehitriny.